सिन्दुर लगाउनु कति हानिकारक ? जान्नुहाेस् यस्ताे छ तथ्य | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सिन्दुर लगाउनु कति हानिकारक ? जान्नुहाेस् यस्ताे छ तथ्य
सिन्दुर लगाउनु कति हानिकारक ? जान्नुहाेस् यस्ताे छ तथ्य
मंसिर ९ गते, २०७६ - १६:१०
काठमाडाैं । विवाहित महिलाहरूले आफू विवाहित भएको पहिचान गराउनका लागि सिन्दूरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सिन्दूरलाई विवाहित महिलाहरूको मुख्य श्रृंगारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यस्ता सिन्दूर स्वास्थ्यका हिसावले भने हानिकारक हुने पाइएको छ ।
सिन्दूरको प्रयोगले नवजात शिशुहरू सबैभन्दा धेरै जोखिममा पर्ने हुन्छ । आमाको सिन्दूरले ६ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका लागि स्वास्थ्यमा एकदमै प्रतिकूल असर पर्छ । (एजेन्सीबाट)
मंसिर ९ गते, २०७६ - १६:१० मा प्रकाशित